ကျောက်ကြီးမြို့၌ ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြု စီမံကိန်း၏ ပါဝင် ပတ်သက်နေသူများ တွေ့ဆုံဆွေး?? - Yangon Media Group
ကျောက်ကြီး၊ အောက်တိုဘာ ၁၈
ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြု စီမံကိန်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူ များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အောက် တိုဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီ က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက် ကြီးမြို့ ခရစ်ယာန်သာသနာခန်းမ ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် KNU ဗဟိုကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံ ချုပ် စောရောဂျာခင်၊ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖဒို စောဆဲဂေ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး Ms. Tone Tinnes ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာ လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Wouter Robert Marie Jurgers, Head of Section Sweder မှ Mr.Johan Hallenborg နှင့် NPA Consltant Mr.Janes Charies Patrie တို့က အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားကြသည်။
ယင်းနောက် CIDKP ညွှန် ကြားရေးမှူးနှင့် စီမံကိန်းတာဝန်ခံ စောဘယ်ထူးတို့မှ ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြု စီမံကိန်း၏ ပါ ဝင်ပတ်သက်သူများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်း ပရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်း လင်းပြောကြားကာ ဒေသခံပြည် သူများ၏ မေးမြန်းချက်များအား တက်ရောက်လာသည့်တာဝန်ရှိသူ များက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် ယခင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရရှိခဲ့၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့်လူမှုဘဝအ ခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခဲ့မှုကို ပြန်လည်ကုစား ပေးနိုင်ရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ ပေါ်ထွက်လာသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စဉ်များဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။